Maqaal-Xagjirnimmadda Xalkeedu ma xabbad-baa ? - Horseed Media
Maqaal-Xagjirnimmadda Xalkeedu ma xabbad-baa ? June 14, 2012 Share this:FacebookTwitterGoogleMahad oo dhan Alle ayay u sugnaatay allaha (SW) leh Aduunka iyo Akhiradda iyo inta dhex taal, Wanaagsanaan bini,aadam waxaa leh Nabbi Muxamed (NNKH) Dalka Soomaaliya waa dal dawlad la,aani haraysay sababna ay u tahay dawlad la,aantaas xanuunka dhimirka waxyeeleeya ee Qabyaaladda oo iyaddu ah mid bini ,aadamka ay hab fakarkooda saamayso ka dhigta kuwo aan lahayn hab fakar curineed ku dhisan nolol wanaagsan ee aduunyo sidoo kale waxay waxyeello gaarsiisaa naawilitaanka guulaysasho ee abaalmarinta Alle (SW) uu u balan qaaday qofki u hogaamsama waajibaadka uu dul yeelay bini ,aadamka waa rumaynta diinta islaamka ka dib sidda wadaaddada diinta Fahankeeda yaqaani sheegeen.
Haddaba hogaan dhexe la,aanta Soomaaliya ka jirta ayaa keentay in wax kasta la fisho sidaan aragnay waxaa dalka Soomaaliya ka samaysmay Kooxyo diimeed kala aragtiyo duwan oo marxaladdo kala duwan soo maray ugu dambayn waxaa awood yeeshay kooxda Al shabaab ee iyaggu xambaarsan hab fakar ku dhisan carro, in dadka la cabsi galiyona ay u arkaan in Sidaas wanaag-sannaan iyo khayr ku imaanaayo kala dambayn iyo dawlad-nimmo ku dhisan Muslim-nimo barax la iyo Qowmi-nimmo Soomaaliyeed ay keenayso.
Aragtida Al shabaabnimmadda ah ayaan oran karaa waa aragti casabiyad iyo xanaaq hogaanka u hayo , Fikir kasta oo xanaaq iyo carro lagu meel mariyo inta baddan ma ahaan karro fikir mirro dhal ah , Al shabaab waa jiraan waxyaabo ay ku saxan yihiin oo Fikir dhamaan wada qaldanni ma jiro marka laga tago garashada ay saamayso hab fakarkeeda Qabyaaladdu oo iyaddu marna aan lahaan karin wax wanaagsan .
Aan ku soo daadago Cinwaanka qormadayda ee ah Xagjirnimmadda Xalkeedu ma Xabdad-baa? maya xagjirnimmo xalkeedu ma ahan xabbad iyo xarig toona ,Runti ma ahan aragti sax ah sidaan qabo in kooxda shabaab oo xabbad lagu dham